Ciyaaraha Badbaadada ee ugu Fiican PC - Hagayaasha Android | Golaha Moobaylka
Ciyaaraha badbaadada ugu fiican ee PC
Michael Hernandez | | Ciyaaraha
Ciyaaraha fiidiyowga ee ka badbaada Caqabad adag ku ah ciyaartoyda, waana taas sababta ay ula wadaagayaan Battle Royale ay u noqonayaan mid ka mid ah noocyada sida aadka ah ay u dalbadaan ciyaartooyda ugu da'da yar suuqa. Ma eedeyn karno iyaga, xaqiiqadu waxay tahay inaan waqti fiican ku helno noocan ah ciyaarta fiidiyowga.
Xaaladdan oo kale waxaynu haysannaa noocyo kala duwan oo wanaagsan, bey'aduna waxay muhiim u tahay sida sheekada ka dambeysa ciyaarahan fiidiyowga ah. Nala joog oo soo hel kuwa ugu fiican kulamada badbaadada ee kombuyuutarka ee laga heli karo suuqa, waxay leeyihiin waqti fiican oo ay ku ciyaaraan.
2 Ark: Badbaadada fartaan
4 Forest The
5 Conan Xarigga
9 Jahannamo cagaaran
Aynu ku bilowno mid ka mid ah kuwa ugu caansan, ciyaarta fiidiyowga ee ay guuleysato shirkadda Microsoft ayaa weli ah maanta waa waali dhab ah meelaha sida YouTube ama Twitch halkaas oo ay ka goosato boqolaal kun oo booqasho maalin kasta, waana in "ciyaartooyda" Minecraft aysan waligood ka bixin moodada.
Minecraft waxay leedahay dhowr shey oo waliba si heer sare ah loo habeyn karo, tani waxay naga caawinaysaa inaan abuurno taariikhdeena iyo xitaa 'doorarka' bulshada dhexdeeda Si loo aasaaso aasaaska nolol maalmeedka ciyaarta taas oo naga dhigeysa inaan ku soo laabanno maalin maalin kadib, taas oo aan macquul aheyn.
Ciyaarta waxaa loogu talagalay dhagaystayaasha oo dhan, waxay asal ahaan ku saleysan tahay farshaxanka sheyga iyo suurtagalnimada in la dhiso kaabayaal markii la doono. Si kastaba ha noqotee, daqiiqad kasta waxaa nagu soo duulaya cadawga CPU iyo xitaa kuwa kale ee isticmaala cadawga oo aan u muuqan inay daneynayaan dhamaan howlaha aan soo saarnay.
Ark: Badbaadada fartaan
Hadda waxaan la aadaynaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan waqtiyadan dhowaa, ciyaartan fiidyowga ah waxay ku bilaabatay "beta" waji soo jiitay tiro wanaagsan oo xiiso leh isla waqtigaas waxay ku kasbatay dhaleeceyn xoog leh joogitaanka qaladaad muhiim ah oo aan u oggolaanayn in si raaxo leh loogu raaxaysto.
Si kastaba ha noqotee, waa wax aad u xiiso badan maxaa yeelay deegaanku asal ahaan waa jasiirad khatar ah oo ay ka buuxaan dinosaurs, wax sida "dib u soo kabasho" ee Jacka Park, maxaa diidaya. Waa inaan la qabsano isbeddelada lama filaanka ah ee heerkulka, aan hubinno ku tiirsanaanta cuntada iyo biyaha, dhammaantood annaga oo aan ilaawaynin in xayawaan qiro goos goos ahi na kala dumin karo.
Waa muhiim in la dhiso gabaadyo, haddii kale markii aan ciyaareynin way na baabi'in karaan, maadaama dabeecadda ay weli ku taal jasiiradda. Halkaas ayaa qaaska laga soo saaraa muhiimadda ay leedahay la-dhaqanka dadka kale ee deggan iyo sameynta qabaa'il noo oggolaanaya inaan abuurno dalagyo kuna noolaan karno xaaladaha wanaagsan.
Ciyaartan fiidiyowga, oo goobta ku jirtay sannado badan, sheekadan badbaadada ciyaaruhu waxay ku bilaabatay si ficil ahaan ah. Markan waxaan dooranay astaamaha "Zombie Apocalypse" oo abuuraya xiiso aad u badan oo ka dhex jira dadka jecel nooca, si kastaba ha noqotee, sida had iyo jeer dhacdooyinkan, cadowgeenna ugu weyn wuxuu noqon doonaa aadanaha caadiga ah.
Waa run in DayZ aan la samaysan karno koox asxaabteena ah si aan ugu istaagno labada zombies iyo astaamaha intiisa kale, markaa iskaashigu mar kale waa tiir aasaasi ah oo noocan ah.
Sida dhibco xun, waxaan helnay sacab muggeed oo "haakaris" ah oo loogu talagalay in lagu sumcaddeeyo khibrada isticmaale, iyo inkasta oo cimri dhererku ciyaarta iyo xaqiiqda oo aysan waligeed "bilaash ahayn", horumarka ayaa si gaar ah fadhiid u ah, taasoo adkeyneysa mararka qaar in lagu raaxeysto khibrada si joogto ah.
Sheekadu si yar ayey uga shaqeysay kiiskan, ugu yaraan marka ay timaado gelitaanka doorka badbaade. Waa inaad raadisaa naftaada waxyar kadib shil diyaaradeed, illaa iyo hadda wax walbana waa caadi, laakiin ma noqon karto mid sahal ah, arrimaha ayaa aad u murugsan.
Shilka ka dib waxaan ku dhex baasan doonnaa keyn weyn oo ay ka buuxaan dad cunno dad ah oo ujeedadooda kaliya ay tahay inay nagu ciidaan. Tani waxay ku abuurtaa dareen deg deg ah qofka adeegsadaha ah in dhowr ciyaarood oo noocyada ah ay awood u leeyihiin inay ku daydaan. Maxaa intaa ka badan, processor-ku wuxuu hubiyaa inaanan waligeen deggenayn.
Daqiiqad kasta waxaa lagama maarmaan ah in la dagaallamo, haddii ay sidaas dhacdona, mararka qaarkood waxaa wanaagsan in si fudud loo cararo. Waxaan u diri karnaa boostada si aan u abuurno hub casri ah, aan u dhisno xeryo una la dagaallanno cimilada. Tartanku wuxuu ku adkaadaa xitaa khabiirka ugu badan, shaki la'aan waa tartan xiiso leh oo aan aad ugu boorinayno.
Conan "Barbariyiinta" iyo ciyaar fiidiyoow badbaado ah ... maxaa khaldami kara? Jawiga ayaa si cad diirada loogu saaray dabeecadda iyo astaamaha laga yaabo in xoogaa ka badan oo ka mid ah isirrada horumar laga gaaro badbaadada kaliya. Firfircoonidu waa lagama maarmaan ciyaartan khalad kasta oo naga dhacaana waa naga sii dayn karaa.
Waa inaan la dagaallannaa cimilada, ha ahaato kuleyl iyo qabow. Waxaan weerari karnaa beelaha kale oo aan isku dayi karnaa inaan xukumi karno tirada ugu badan ee dhulal ee suurtagal ah, Tani waa sababta ugu dambeysa ee damaanad qaadi karta nolosheenna. Tan awgeed waa inaan la dagaallannaa bini-aadamka iyo makhluuqaadka ay maamusho CPU-ga, weligaa ammaan buuxda ma tihid.
Cayaartu waxay umuuqataa mid aasaasi ah marka lala barbardhigo kuwa kale ee kujira liiskan, laakiin dagaalada, go'doominta iyo dhismayaasha waxay naga dhigi doonaan inaan ka fikirno wax kabadan inta aan maleysanay. Si kastaba ha noqotee, waxaa si cad loogu talagalay dadka isticmaala kuwa leh soo jiidasho gaar ah dabeecada su'aasha.
Shaki la'aan waxa ugu qariibsan ee ciyaaraha lagu soo daray liiskan, laakiin marwalba waxaan haysanaa meel yar oo waxyaabo dhif ah, waxbadan baa inaga maqnaan lahaa. Sida haddii aysan taasi ku filnayn meerayaal shisheeye, xaaladdan waxaan isku dayeynaa inaan ku dhex milno badda mideheeda.
Haddii badaha iyo badaha dhulku khatar yihiin, qiyaasi meeraha shisheeyaha. Ujeedkeenu maahan mid kale oo aan ka badbaadin karno halista oo dhan, gaar ahaan xayawaannada kala duwan ee ujeedkoodu kaliya yahay inay helaan cunto fudud. Dabcan, ciyaartu waa midabo iyo xiiso badan, aad iyo aad bay u badan tahay in xitaa ay noqon karto mid carruurnimo iyada oo la tixgelinayo kuwa kale.
Qaybta wanaagsan ayaa ah inaan ku nasan karno magangalyada, gabbaad aan dhisi doonno anagoo ku farsameynay khariidada oo dhan. Markaa waxaan dhisi karnaa gawaarideena ku habboon baahiyahayaga, tallaabooyin si looga fogaado dhimashada iyo dhacdooyin badan oo soo afjari kara oo naga dhigaya inaan helno waqti xun.
Nooc kale oo nooc ah oo ah Rust. Iskuday inaad xoogaa macquul ahaato marka laga hadlayo ciyaarta dhibaatada, Tan iyo markii aan bilownay, gebi ahaanba qaawan oo aan hubaysnayn, waa inaan ku hormareynaa dhul laga yaabo inay "naqaan", iyadoo la tixgelinayo beddelka aan horay ugu aragnay liiskan.
Waa inaan raadinaa cunsurro sida dhagxaan iyo alwaax si ay nolosha horumar uga gaaraan, ma lihin waddo kale oo maqnaashaha Leroy Merlin aan aadno. Si kastaba ha noqotee, sida badanaa dhacda, isticmaaleyaasha kale ayaa si sax ah ugu weyn dhibaatooyinkayaga, kuwaas oo ujeedadoodu tahay inay xadaan wax kasta oo suurtagal ah, sharciga kan ugu xoogan ayaa macno u leh ciyaarta fiidiyowga badbaadada.
Dagaalka, farsamada gacanta, dhismaha iyo istiraatiijiyaddu waa tiirarka aasaasiga ah ee ciyaartan fiidiyowga ah ee aan waliba wakhti fiican ku qaadan karno. Waxaan la sameysan karnaa xulafo iskaashi lala yeesho ciyaartoy kale, wax noqon kara ama aan damaanad u aheyn guusha.
Waxaan mar kale ka tagaynaa meeraha Dunida, ciyaartaan fiidiyowga ee badbaadada ahna waxay ku saleysan tahay jawi dhex-dhexaad ah, asal ahaan waxaa jira toddobo meere oo ka socda nidaam qoraxda kale oo aad uga duwan Cagaheenna Caaneed. Waan beddeli karnaa deegaanka, waxaan ku dhex socon karnaa meerayaasha kale oo dabcan waxaan qaadan karnaa wax kasta oo aan awoodno.
Farsamaynta ayaa ah go'aan marka la dhisayo maraakiib cusub si loo baaro dhir badan iyo xitaa saldhigyo aad ku nasan karto, in aan sidoo kale uqalmin. Marka lagu daro dusha sare ee adduunyadan, waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan galno godad ay ku yaalliin khasnado badan oo xiiso badan, iyo sidoo kale khataro na gelin kara xaalad xun.
Suurtagalnimada inaan u wada ciyaarno iskaashi waxay shaki la'aan kordhineysaa fursadaha noolaha caadiga ah, waa wax sidii aan horay ugu sheegnay ciyaaraha kale ee fiidiyowga, waa tiir aasaasi ah, ma waxaad doorbideysaa inaad naftaada dagaal u gasho? Inta aad u socon karto adiga ayey kugu xirnaan doontaa.
Waxaan u laabaneynaa xaqiiqada saafiga ah ee fudud, waana in Green Hell lagu dejiyaa hawdka cufan ee halista badan ee Amazon, diyaar ma u tahay waxa kugu soo socda? Muuqaalka dhulku wuxuu umuuqdaa mid aan waxtar lahayn haddii aan u ogolaano nafteena inuu hago dhirta, laakiin waxay qarinaysaa khataro badan oo aan dhowaan ogaan doonno.
Hawsheennu waxay noqon doontaa inaan la dagaallano sidii aan u badbaadi lahayn, mana naga dhigayaan wax fudud. Dab ka abuurista ilaa raadinta qalabka si loo abuuro hoy ayaa naga qaadan doonta inta badan. Haddii aad ka sii dhiirran tahay waxaad mar walba geli kartaa god, laakiin iska ilaali cawaaqibka.
Halyeeyga dhaqso ayuu ku bilaabaa dhibaatooyin nafsi ah, wax la fahmi karo marka loo eego xaalada. Dhinaceeda, waa inaan raadinaa cunno, qaabab aan ku bogsiino nabarrada na soo gaadhay iyo inbadan. Waxay si gaar ah diiradda u saartaa sahaminta iyo bogsashada.
Sida ciyaaraha kale ee fiidiyowga waxaan ku raaxeysan karnaa labadaba kali iyo qaab iskaashi, Waxay ku xirnaan doontaa rabitaankeenna inaan gacmaha laabanno lamaane, in kastoo Tani waxay si aan leexleexad lahayn u macnaheedu tahay koror jibbaar ah oo ku saabsan fursadaheena badbaadada.
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay liistadayada fiidiyowga badbaadada fiidiyowga ugu fiican ee kombuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Ciyaaraha badbaadada ugu fiican ee PC
Kuwani waa barnaamijyada ugu fiican ee lagu cabbiro heerkulka PC-ga
10 Ciyaaraha Android ee ugu Fiican Internet la'aan